Ikike Ọrụ - MH Eriri
cart | Sitemap
Ngwaahịa & Eke
Ọkpụkpụ na-atụgharị ọnụ
Nwepu ụcha ákwà
Une Polyester Yarn / kpuchie eriri
Akpa Na-emechi Ihe
100% Nke a na-agbaso Xwingị na-agba ọsọ
Nylon High Tenacity Thread
ECO Polyester Sewing string
Mmiri nke Mmiri nke Na-edozi Ihe
Viscose Rayon Embroidery Thread
Ihe eji eme ocha
Azu Ahia ahu
Kitkwaa eriri Kit
Ọrụ nke ọrụ
Ekiko-Tex®Standard100 kwadoro MH ma kwadoro ya dị ka "Ụlọ Ọrụ Ntanetị 500 China" na "ụlọ ọrụ AAA Trustworthy".
Na-eche banyere nchebe gburugburu ebe obibi
Site n'olitewanye nke China na aku na uba onodu uwa nile, ebe obibi uwa na-akawanye njọ. Karịsịa ikuku, mmiri, na mmetọ mmiri na-arịwanye elu. MH na-arụ ọrụ ya iji kpuchido gburugburu ebe obibi.
Na 2015, MH malitere ọrụ "nchedo gburugburu ebe obibi na-acha akwụkwọ ndụ," na-akpọ ndị ọrụ Mhị ka ha chebe ihe okike okike ma na-eme echiche nke "akara ụkwụ ndụ" na-eme n'èzí.
Dịka ihe eji ejiji uwe mara mma, MH nọ na-emepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka afọ 16, ma gbaa mbọ chọpụta otú e si belata usoro mmepụta nke ihe emetọ emetọ, tinye ego iji wuo ụlọ nyocha nke mmiri nsị, jide n'aka na mmepụta ihe na-emepụta ihe na gburugburu ebe obibi. . Na 2015 MH, a kpochapụrụ ya na polyester, a na-eji polyester gbanwere ya, na Better- Cotton-Initiative anọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-amalite site na ihe ọkụkụ iji na-emepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Obiọma na ọrụ ọha na eze
MH guzobere "Xiao dou ya" Fund for scholarship iji nyere ụmụntakịrị aka n'obodo nta iji mezue ọmụmụ ihe ha. MH enyere umuaka umuaka 7 ego maka afo iri.
N'oge okpomọkụ ọ bụla, ndị ọrụ afọ ofufo Mh ga-eziga onyinye dị jụụ maka ndị ọrụ ọcha na ndị uweojii na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè. Ọ na-akwado ọrụ uwe "uwe" ma nyefee uwe 10,000pcs na obodo nta dara ogbenye na Guizhou, Yunnan na ebe ndị ọzọ dara ogbenye.
Kwa afọ, ndị ọrụ afọ ofufo MH ga-eleta ụmụaka na Ningbo Enmeier ụlọ ọrụ ọdịmma ụmụ, na-egwu ụmụ, na inye ha onyinye.
Ụkpụrụ MH: Atụmatụ ndị ahịa, Imekọrita ọrụ, Innovation, Passion, Iguzosi ike n'ezi ihe
MH ewepụtala akwụkwọ akụkọ "MH Weekly", MH APP na usoro nkwurịta okwu ndị ọzọ iji kesaa omenala Mh.
MH nwere ego pụrụ iche iji kwado ọrụ omenala, dị ka afọ nke ọ bụla, ọrụ ụlọ, njem ndị ọrụ, wdg. Mh nwekwara basketball club, football club, clubing hiking club, ụlọ foto, na ndị ọzọ, ụlọ asatọ asatọ, n'efu maka MH ndị ọrụ iji nweta ndụ dị mma.
Ilekọta ahụike nke ndị ọrụ
MH nwere ego pụrụ iche maka ahụike ndị ọrụ. MH na-enyocha ndị ọrụ MH kwa afọ, na-ahazi okwu ahụ ike, na-asụ ụzọ ndụ dị mma na nchekwa nchekwa ahụ ike. E wezụga nke ahụ, MH guzobere "ọrụ Firefly" iji kwado ego, iji nyere ndị ọrụ mh nwere nnukwu ọrịa ma ọ bụ ọdachi dakwasịrị. "Ego" Firefly "enyerela aka karịa ndị ọrụ iri na 2 afọ gara aga.
Nyocha Ugbu a
1000 odide ekpe
Idebe faịlụ ebe a bulite
MH Bldg., 18 # Ningnan North Road, District Yinzhou, Ningbo, China
NKWUKWUGHỊ © 1999-2021 | Ningbo MH Thread Co., Ltd.
MH Otu | MH ahia | MH Mkpịsị | MH Ribbon & Mezie | MH Zipper | MH bọtịnụ